Haweenay loo Magacaabay Guddoomiyihii Bandhiga dhexe ee Soomaaliya iyo Xil ka qaadis lagu sameeyay Gudoomiyihii Hore ee Baanka Dhexe ee Somalia | Salaan Media
Haweenay loo Magacaabay Guddoomiyihii Bandhiga dhexe ee Soomaaliya iyo Xil ka qaadis lagu sameeyay Gudoomiyihii Hore ee Baanka Dhexe ee Somalia
Muqdisho 12.Sep 2013 (SM)- Gudoomiyihii Bankiga Dhexe C/salaan Cumar Hadliye ayaa lagu sameeyay xil ka qaadis, iyadoo xilkaas loo magacaabay Haweeneydii u horeeysay oo madax looga dhigay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in kulan maanta uu leeyahay Golaha Wasiirada lagu shaacin doono magacaabista Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya oo loo magacaabay Haweeney horay uga soo shaqeeyay Bankiga Soomaaliya.
Haweeneydan ayaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya oo haatan booqasho ku jooga dalka isu taga Imaaraadka carabta, waxaana ay sidoo kale qeyb ka noqoneysa wafdiga dowladda uga qeyb galaya shirka Brussles ee 16-ka bishan furmaya.
Ilaa iyo hada ma aanu helin magaca Haweeneyda loo magacaabay Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya, inkastoo ay ka mid aheyd dadkii horay uga soo shaqeeyay Bankiga Dhexe dowladii hore ee kacaanka.
Haweeneydan ayaa noqoneysa qofkii labaad oo jaga sare ka heysa dowladda Soomaaliya, iyadoo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan ay horay u aheyd Ra’iisul Wasaare kuxigeen iyo Wasiirada Arrimaha dibada.
Gudoomiyihii hore ee Bankiga Dhexe ee Soomaaliya C/salaan Cumar Hadliye ayaa iska fogeeyay eedeyn uga timid kooxda la socodka Qaramada Midoobey oo ahaa in hanti lagala baxay Bankiga Dhexe.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay inay hagaajisay maamulka dhaqaalaha Soomaaliya, isla markaana adeeg cusub oo lacag qaadashada ah lagu soo kordhiyay Bankiga Dhexe, iyadoo dhowaan mushaar lagu siiyay shaqaalaha dowladda.